Xiisad u dhaxeysa Ciidamada Somaliland iyo Jabhad hubeysan oo ka taagan Gobolka Sanaag – Banaadir Times
Xiisad u dhaxeysa Ciidamada Somaliland iyo Jabhad hubeysan oo ka taagan Gobolka Sanaag
By banaadir 28th July 2019 177
Wararka ka imaanaya Gobolka Sool ayaa sheegaya in xiisad dagaal oo u dhaxeysa Ciidamada Somaliland iyo Jabhad hubeysan ay ka taagan tahay deegaan duleedka ka ah magaalada Ceerigaabo, halkaasoo shalay dagaal ku dhex maray labada dhinac.
Dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Somaliland iyo Maleeshiyaad uu hoggaaminayay Col. Caarre ayaa ka dhacay duleedka Ceerigaabo, kaasoo la sheegayo in khasaare kala duwan uu labada dhinac ka soo gaaray.
Afhayeen u hadlay Jabhada hubeysan ayaa sheegay in dagaalkii shalay ay guulo ka gaareen, kalana wareegeen Ciidamada Somaliland deegaano dhowr ah.
Jabhadda hubeysan ee uu hoggaaminayay Col. Caarre ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku hanjabayay inay dagaal ku qaadayaan Somaliland, iyagoo ah ciidan fallaago ah oo si adag uga soo horjeeda Maamulka Somaliland.
Waa sidee Xaaladda Dhaawacyadii Qadar loo qaaday
By banaadir 26th August 2018